Musharax Geelle oo ka tacsiyeeyay geerida Suldaan Axmed Jaamac – Banaadir Times
Musharax Geelle oo ka tacsiyeeyay geerida Suldaan Axmed Jaamac
By banaadir 12th March 2021 77 No comment
Musharax Madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee Suldaan Axmed Jaamac Xirsi oo lagu aasay dalka Jabuuti.
Musharax Madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle ayaa tilmaamay in Marxuumku uu kaalin mug leh ka soo qaatay dib u dhiska dowladnimada, nabaddeynta, dib u heshiisiinta iyo dhammaan dadaalladii geeddi socodka ee xal u helidda dhibaatooyinka dalkeenna ka dhacay.
Waxaan murugada la qaybsanayaa bulshada Soomaalida, ehellada iyo qoyska uu ka geeriyooday Alle ha u naxariistee Suldaan Axmed Jaamac Xirsi oo ku geeriyooday Jabuuti, geerida Suldaan waxaan si gaar ah uga tacsiyeenayaa dowladda iyo shacabka Puntland.
Suldaan Jaamac wuxuu ka mid ahaa odeyaasha dhaqanka Puntland, wuxuuna kaalin wayn ka qaatay dib u heshiisiinta Soomaaliya burburki kadib.
Waxaan Alle uga baryayaa Marxuumka in jannadi Firdowso ka waraabiyo sabar iyo iimaan alle naga siiyo dhammaanteen.
Meydka madaxweynihii hore oo maanta la keenayo Muqdisho
UK oo ku baaqday in la sii waddo wadahallada si loo dhameeyo khilaafka doorashada Soomaaliya
Hoggaamiyaha Tigray oo sheegay in ay soo rideen Diyaarad dagaal.
By banaadir 30th November 2020
Musharixiinta Madaxweynaha 2021, Deni & Madoobe oo Nairobi ku kulmaya.